NFC Reader Munyori Vanopa uye Fekitori | China NFC Reader Munyori Vagadziri
RFID Kadhi Mifare Reader
Protocol: ISO 14443 Type A Chips: Mifare 1k, Mifare 4k, Mifare Ultralight C, NTAG203, nezvimwe. HF Kakawanda Frequency: 13.56MHZ Zvimiro 1. Dzivisa manyorerwo ekupinza kukanganisa 2. Chengetedza nguva yako nekureruka uye kurongeka 3. Yemahara yekuisa mutyairi, inoenderana neWindows98 / 2000 / XP 4. Simba pane USB Rondedzero 1. Tsigiro 13.56Mhz Frequency Kadhi 2 . 5- 10cm Proximity Reading Range 3. Standard USB to PC Communication Interface 4. Power on USB 5. -10 to 70 C Ambient Temperature 6. Pasina 100mA Kushanda Iyezvino 7 ...
ACR1281U-C1 rfid smart kadhi nfc muverengi munyori
ACR1281U-C1 DualBoost II chizvarwa chechipiri che ACS's ACR128 DualBoost Reader. Iyo inoverengeka interface muverengi iyo inogona kuwana chero yekubata uye isingabate smart makadhi anoteera iyo ISO 7816 uye ISO 14443 zviyero. ACR1281U-C1 DualBoost II inogonesa mumwe kubatanidza zvakavanzika zvakasiyana uye zvakazvimirira zvikumbiro zvekutaurirana uye zvisina kufambidzana matekinoroji muchigadzirwa chimwe chete uye kadhi rimwe. Inogona kushandiswa pakutengesa pamhepo kugadzirisa zvikwereti zvakachengeteka uchishandisa makadhi echikwereti, uye inogona zvakare kushandiswa kukwikwidza makadhi asingataure mune otomatiki mari yekuunganidza. Iyo inopa yakakwana mukwanisi kune ese-mu-one kadhi pfungwa iyo inosanganisa akawanda marudzi ema smart kadhi kunyorera mune imwe chete kadhi.
ACR1281S-C1 rfid smart kadhi nfc muverengi munyori
ACR1281S-C1 DualBoost II iri hunyambiri interface muverengi iyo inogona kuwana chero yekubata uye isingabatanidze smart makadhi anoteera iyo ISO 7816 uye ISO 14443 zviyero. ACR1281S-C1 DualBoost II inogonesa mumwe kusanganisa zvakajairwa zvakasiyana uye zvakazvimirira zvikumbiro zvekutaurirana uye zvisina kufambidzana matekinoroji muchigadzirwa chimwe chete uye kadhi rimwe. Inogona kushandiswa kubhengi kana e-commerce kugadzirisa zvikwereti kana kumwe kushandisirana zvakachengeteka uchishandisa makadhi echikwereti, uye iyo yekuongorora makadhi asina kutaurirana kuti upe mukana kune dzimwe nzvimbo kana nzvimbo dzekushandira. Iyo inopa yakakwana mukwanisi kune ese-mu-one kadhi pfungwa iyo inosanganisa akawanda marudzi ema smart kadhi kunyorera mune imwe chete kadhi.
ACR1251U USB isingatauri nfc muverengi munyori
Iyo ACR1251U USB NFC Reader II inopa epamberi maficha senge firmware kusimudzira, iyo SAM (Yakachengeteka Yekuwana Module) slot, uye rutsigiro rweNFC tag nemidziyo. Izvo zvakanaka kune zvisina kufanira kunyorera zvine akawedzera ekuchengetedza mabasa. Kuburikidza neSAM, kusiyanisa kwakakosha uye kuwirirana kwechokwadi kunoitwa kugoneka, kudzikisira kuburitswa kwemakiyi uye kudzikisira mukana wekiyi kubiwa. Izvi zvinopa yakakwira nhanho yekuchengetedzeka mukuita pasina kusangana.
ACR1222L VisualVantage USB NFC Reader ine LCD
ACR1222L iLCD-yakashongedzerwa PC-Yakabatanidzwa NFC Isingatauri Reader ine USB seyakagamuchirwa interface. Iyo inovandudzwa zvichibva pane 13.56 MHz RFID tekinoroji uye iyo ISO / IEC 18092 yakajairwa. ACR1222L inogona kutsigira ISO14443 Type A uye B makadhi, MIFARE, FeliCa uye ese mana marudzi eNFC tag.
ACR123U isingabate bhazi nfc Reader
Iyo ACR123U ndiyo USB vhezheni ye ACR123S, inodhura-inoshanda, inochinjika uye ine hungwaru isingatauri muverengi. Inogona kuve yakasanganiswa kune aripo (Point-Yekutengesa) zviteshi kana mari marejista, kuti ipe iko nyore kweye isina mari yekubhadhara system. Iyo ACR123U inomhanyisa kufamba mumacheka ekutarisa, nekugonesa vatengi kupedzisa kubhadhara nekungobaya zvavo makadhi.
ACR123S isina kutaurirana bhazi nfc Reader
ACR123S Intelligent Contactless Reader isingadhuri, isingachinjiki uye isinganzwisisike muverengi isingabatanidzwe inogona kubatanidzwa kumaterminal ePOS (Point-of-Sale) kana maresitoreti emari kuitira kuti ishandiswe nzira yekubhadhara isina mari. Yakagadziridzwa zvichibva pa13.56 MHz isina kutaurirana (RFID) tekinoroji, inotsigira chero kadhi risingabatanidzwe rinoteera iyo ISO 14443-4 standard.
ACR122U NFC Muverengi
Iyo ACR122U NFC Reader ndeye PC-yakabatana isingatauri smart kadhi muverengi / munyori akavakirwa zvichibva pa13.56 MHz Yekubata isina (RFID) Technology. Inoenderana neiyo ISO / IEC18092 chiyero cheNega Munda Kutaurirana (NFC), inotsigira kwete chete MIFARE® uye ISO 14443 A neB makadhi, asiwo ese mana marudzi eNFC tag.
Iyo ACM1281U-C7 USB isingatauri Reader Module ine SAM Slot yakagadzirirwa kubva pa13.56 MHz tekinoroji yekumhanyisa uye nyore kusanganisa mumidziyo yakadzika.